गृहमन्त्री बादल र मेयर रेणुका खासका मान्छेले क्रिकेट रंगशालामा डोजर चलाएको खुलासा, के हुन्छ कारवाही ? — Sanchar Kendra
कँडेल भरतपुर महानगरपालिका–१६ का नेकपाका स्थानीय नेता हुन् । उनी ठेक्कापट्टामा समेत संलग्न छन् । कँडेल गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) र भरतपुरकी मेयर रेणु दाहालका खस मान्छे भएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । कँडेलमाथि प्रहरी प्रशासनलाई धम्क्याउने गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ ।
प्रहरीले उनलाई बुधबारराति पक्राउ गरेको चितवनका प्रहरी प्रमुख दानबहादुर मल्लले जानकारी दिए । कँडेलसँगै घटनामा संलग्न अन्य १६ जनालाई पनि प्रहरीले पक्रेको छ । कँडेललाई नियन्त्रणमा लिए पनि सोधपुछ बाँकी रहेको प्रहरी प्रमुख मल्लले बताए । हाल उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ ।
सार्वजनिक सम्पतिमा नोक्सानी पुर्‍याएको तथा धम्क्याएको अभियोगमा कँडेलविरुद्ध मुद्दा चलाउन सकिने एसपी मल्लले बताए । रंगशाला निर्माणस्थलमा लगाइएको बार कँडेल नेतृत्वको समूहले बुधबार भत्काएको थियो । बार भत्काउने क्रममा उनीहरुले कर्मचारीहरुलाई समेत धम्क्याएको धुर्मस–सुन्तली फाउण्डेशनको भनाइ छ ।
स्रोतका अनुसार कँडेलले प्रचण्डपुत्री रेणु दाहाललाई मेयरको चुनाव जिताउँन प्रमुख भुमिका समेत खेलेका थिए । उनले बार भत्काउँदा पनि मेयर रेणु दाहाललाई मैले नै जिताएको हुँ कसले के गर्छ ? भन्दै रंगशालाको बार भत्काएको स्थानीयले बताएका छन् । बार भत्काएपछि अनेक दुख र हण्डर खाएर देशका लागि रंगशाला निर्माणमा जुटेका सिताराम कट्टेल धरधर्ती रोएका थिए ।
बार भत्काइएपछि धुर्मुसले रुदै भनेका थिए “यो दुखद घटना घटेको छ । एकाबिहानै स्थानीय र केही अराजक भिड जसको अगुवाईमा यो घटना भयो । आफ्नै आँखा अगाडि जनु दृश्य मैले देखे योभन्दा कारुणिक दृश्य सायद मैले जीवनमा कहिल्यै पनि देखेको थिइन “।
उनले डोजर लगाएर बार भत्काउनेहरुले पहिले पनि पटक पटक रंगशालामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई धम्काउने कमिशन माग्ने , उनीहरुको मान्छे हाल्नु पर्ने , उनीहरुको मेशिन चल्नु प¥यो यस्ता यस्ता धम्कीहरु दिँदै आएको बताएका छन् ।
बुधबार नेकपाका स्थानीय नेताको नेतृत्वमा आएको समूहले अस्थायी संरचनामा डोजर लगाएर भत्काइदिएपछि समस्या समाधान नभएसम्म काम गर्न नसकिने भन्दै ‘धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशन’का अध्यक्ष सीताराम कट्टेल धुर्मसले विज्ञप्ती जारी गरेर काम गर्न नसक्ने जानकारी दिएका छन्।
‘कार्यालयका कर्मचारी, काम गर्ने मजदुरको जिउज्यान तथा भौतिक सम्पत्तिमाथि सुरक्षाको विषयमा खतरा तथा गम्भिर परिस्थिति आइपरेकोले स्थायी समाधान नभएसम्म यस परियोजनाको काम स्थगित गरिएको छ। साथै देश तथा विदेशमा रहेर सहयोग गर्नुहुने सबैमा पर्न गएको असरप्रति क्षमा चाहन्छौँ।’ धुर्मुसले विज्ञप्ती मार्फत भनेका छन् ।
बुधबार विहान ७ बजे देखी ११ बजे सम्म बारमा डोजर चल्दा पनि स्थानियले टुलु टुलु हेरेर बसेको प्रति दुख लागेको उनले बताए । उनले डोजर चल्दा आफु त्यहि स्थानमा रहेको र आफुलाई एकपटक समेत जानकारी नै नदिइ डोजर चलाएको दुखेसो पोखे । यस्तो निन्दनीय कार्यमा संग्लनहरुलाई कारवाही गरी नागरिकको जिउज्यानको सुरक्षा नभएसम्म तत्कालका लागि निमार्ण कार्य स्थगित गरीएको उनले बताए ।
यसैबीच रंगशालामामा डोजर चलेको बिषयले यतिबेला सामाजिक संजाल पनि तातेको छ । डोजर चलाउने समुहको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले बिरोध गरेका छन् ।